လူ ၊ လောက ၊ ကမ္ဘာ နဲ့ ငါ (သက်ထွေး)
Posted by ပုလဲသား at 6:20 PM0comments
Labels: ကဗျာ, ပညာပေး(သို့)ဆုံးမ ကဗျာ, ကောင်းနိုးရာရာ ကဗျာ
ခရမ်းချဉ် သီးရောင်းတဲ့ သူဌေးကြီး
အလုပ်အကိုင်မရှိသေးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အလုပ်လိုချင်တဲ့ အတွက် မိုက်ကရိုဆောဖ့် ကုမ္ပဏီမှာ ရုံးအကူ တစ်နေရာအတွက် အလုပ် သွားလျှောက်
ပါတယ် …. သက်ဆိုင်ရာ ခန့်ခွဲမှု မန်နေဂျာက သူ့ကို အင်တာဗျူး လုပ်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ကြမ်းပြင်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းပြီး သူ့ကို စမ်းသပ် စစ်ဆေး ပါတယ်…
စမ်းသပ်လို့ သူ့လုပ်ရည် ကိုင်ရည်ကို ကျေနပ်သွားတဲ့အခါ မန်နေဂျာက ကောင်လေးကို “ကဲ.. မင်းကို အလုပ်ခန့်လိုက်ပါပြီ… မင်းရဲ့ အီးမေလ်း လိပ်စာ ထားခဲ့…
မင်း အီးမေလ်းထဲကို အလုပ်ခန့်လွှာပို့လိုက်မယ်.. မင်းက အဲဒီထဲမှာ လိုအပ်တဲ့
Posted by ပုလဲသား at 6:07 PM0comments
2012 မြင်း fashion
ခေတ်နဲ့အညီ အစားအသောက် design
တိုးတတ်လာသော အာရှနိုင်ငံများဧ။် အ၀တ်အစား အဆင်အယဉ် အနေအထိုင်....
ခေတ်ရေစီးကြောင်း ဆိုတာ ဒါလား?
အောင်မြင်တဲ့ ယောကျာ်းနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ မိန်းမ
Posted by ပုလဲသား at 4:19 AM0comments
Labels: ဟာသ, ဟာသ ဓာက်ပုံများ
ဘကြီးအောင် လို မင်းညာတယ်
Posted by ပုလဲသား at 3:59 AM0comments
Labels: myanmar song, သီးချင်းများ
စစ်တိုက်လို့ နိုင်နေသမျှ မင်းရှင်းပြစရာ မလိုဘူးကွ။ အေး-----စစ်ရှုံးလာပြီ ဆိုရင်လည်း ဘာကြောင့်ဆိုတာ ရှင်းပြဖို့ မင်း အသက် မရှင်နဲ့တော့။
ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သင့်ကိုယ်နဲ့ မနှိုင်းမိပါစေနဲ့။ တကယ်လို့ နှိုင်းယှဉ်မိလိုက်ရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင် စော်ကားလိုက်တာပဲ။
အနိုင်ရတယ်ဆိုတာ တကယ်ဆိုတော့ ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရတာ မဟုတ်ဘူးရှင့်။ အရင်တုန်းကထက် ပိုကောင်းတာကို ရှင်တို့ ကျွန်မတို့ လုပ်နိုင်လိုက်တာပါဘဲ။
အကြိမ် တစ်ထောင်လုံး ကြိုးစားတာ် မအောင်မြင်ဘူးလို့ ကျုပ်တော့ မပြောဘူး။ ရှုံးနိမ့်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းပေါင်း တစ်ထောင်ကို ကျုပ်တွေ့ရှိလိုက်ပြီလို့ဘဲ ကြေငြာမယ်။
လူတွေက ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုပြင်ဖို့တော့ တစ်ယောက်မှ မစဉ်းစားကြဘူး။
ဘ၀မှာ ကျင့်ဝတ်လေးဖြာကိုတော့ မချိုးဖောက်မိစေနဲ့ - ယုံကြည်မှု၊ ကတိ၊ ခင်မင်ခြင်းနဲ့ နှလုံးသားတို့ပဲ။ ချိုးဖောက်မိရင် တော့ အသံမကျယ်ပေမဲ့ နာကျင်မှုဆိုတာ အထွတ်အထိပ်ရောက်လိမ့်မယ်။
Posted by ပုလဲသား at 1:02 AM 1 comments
Labels: ထူးချွန်သူများဧ။် ဗဟုသု, အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါး
Posted by ပုလဲသား at 12:48 AM0comments
ပါရမီရှင်များ၊ ဘီလီယံနာကြီးများ၊ စိတ်ကူးကောင်းသူများက ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ နည်းပညာနဲ့ ကမ္ဘာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ နည်းပညာလက်နက်ကို ကိုင်စွဲပြီးတော့ တော်လှန်ရေးတစ်ရပ် ဆင်နွှဲကာ ကမ္ဘာကို ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဟာ အများနဲ့မတူ တစ်မူထူးပြီး ခပ်ကြောင်ကြောင်လူစားတွေလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တီထွင်ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေကတော့ အများနဲ့မတူတာကြောင့်လည်း ထင်ရှားလာခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ တီထွင်မှု သမိုင်းမှာ သူတို့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို ပယ်ဖျက်လို့မရနိုင်လောက်အောင် ချန်ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုတာ အလုပ်၊ စီးပွားရေး၊ ကြီးပွားရေးတွေနဲ့လည်း တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ပတ်သက်နေတတ်ပါ တယ်။ တကယ်တော့ သူတို့တီထွင်ခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်တို့က အလွယ်လေးသုံးနိုင်ကြပေမယ့် သူတို့ အားထုတ်ခဲ့ရတာတွေကတော့ ဘ၀နဲ့ရင်းခဲ့ကြရတာတွေ အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။
သူများတွေ တွေးသလိုမတွေး၊ သူများတွေ နေသလိုမနေ၊ သူများတွေ ဇိမ်ခံသလို မခံတတ်ဘဲ ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့နောက်ကို တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ရင်း၊ အပင် ပန်းအဆင်းရဲ ခံနိုင်လို့လည်း သူတို့ အောင်မြင်ခဲ့တာလို့ ပြောရင်ရနိုင်တယ်။ အခြေအနေတစ်ခုကို သူတို့ရောက်လာဖို့ သူတို့ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တက်ခဲ့ကြတယ်။
နည်းပညာဆိုတာ လူသားတွေရဲ့ လူနေမှုဘ၀ (Life Style) ကို တစ်ခုသော အချိန်ကာလအတွင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်မှုပေးပါတယ်။ လူသားတွေ အကောင်းဆုံး၊ အဆင်အပြေဆုံး၊ အသက်သာဆုံးဖြစ်အောင် သူတို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးဟာ သူတို့တီထွင်မှုတွေကြောင့် အသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာတယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်သူတွေလည်း၊ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။
အဲဒီသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ နည်းပညာတော်လှန်ရေးမှာ ရှေ့တန်းကပါဝင်ခဲ့သူတွေလို့ပြောရမယ်။ နှစ်ယောက် စလုံး တက္ကသိုလ်ပညာကို စိတ်ပျက်ပြီး တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ထွက်ခဲ့တဲ့သူတွေချည်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ “အတွေးအမြင်ကွဲပြားမှု” ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ကြတယ်။
ပထမဦးဆုံး iDevices ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာကို ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ် အယ်လ်တော့စ်မြို့က စတိဂျော့ရဲ့ ကား ဂိုဒေါင်ထဲမှာ စတင်တီထွင်ကြတယ်။ စတိ ဂျော့ရဲ့ သူမတူအောင် ဖန်တီးတီထွင်နိုင်စွမ်း၊ စည်းရုံးနိုင်စွမ်း တွေကြောင့် သူ့လိုပညာရှင်တွေကို သိမ်းသွင်းဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
သမိုင်းတွင်စေမယ့် Apple ကုမ္ပဏီကြီးကို စတင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရုံမက CEO တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ ပညာရှင်တွေကို မဖြစ်မနေဇွဲနဲ့ သည်းသည်းမည်းမည်းရှာပြီး စီမံခန့်ခွဲကာ သူ့စိတ်ကူးကို အကောင်အထည် ဖော်စေနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လည်း Apple ဟာအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
ခုဆိုရင် Apple က အမေရိကန်မှာတင် ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တွေကို မူပိုင်ခွင့် အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့တာ အမျိုးအစားပေါင်း ၃၀၀ ကျော်နေပါပြီ။ စတိ ဂျော့တစ်ယောက် ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာလမှာ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သူချစ်တဲ့အိုင်တီလောကကြီးကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Macintosh, iPod, iPhone, iPad ဆိုတဲ့ သူ့ စိတ်ကူးတွေကို ကမ္ဘာကြီးအတွက် ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ့်နည်းပညာတို့ရဲ့ဆရာကြီးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေသူဆိုတော့ အထွေအထူး မိတ်ဆက်ပေးဖို့တောင် လိုမယ် မထင်ဘူး။ Microsoft ဆိုတာ အိုင်တီခေတ်မှာ နည်းပညာစိတ်ဝင်စားသူတိုင်းနဲ့လည်း မကင်းနိုင်ပါဘူး။ ဘေ ဂိတ်စ် အကြောင်းကိုရေးတဲ့ စာအုပ်တွေအများကြီးထွက်တယ်။ အဲဒီစာအုပ်တိုင်းမှာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကနေ ကျောင်းပြီးအောင် မတက်ဘဲ ထွက်လာတယ်ဆိုတာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရေးသားစရာ အချက်တွေဖြစ်နေတယ်။
Posted by ပုလဲသား at 12:40 AM0comments
Labels: ထူးချွန်သူများဧ။် ဗဟုသု, န, ဆောင်းပါး
ဘယ်အချိန်မှာငြင်းဆိုရ မယ် ဆိုတာ လေ့လာ သင်ယူပါ
-အရာအားလုံးကို သင်မလုပ် ဆောင်နိုင်ပါ၊
-သင်ပြီးစီးအောင် မလုပ်ဆောင် နိုင်တာတွေကို မဆောင်ရွက်ပါနဲ့။(တာဝန် မယူပါနဲ့)
အခုထိဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းဗျူဟာတွေ ဟာ ယေဘုယျစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အလေ့ အကျင့်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အခု သင်တို့ဘဝမှာ အသုံးချနိုင်မယ့် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာနည်းဗျူဟာတွေကို ဆက်လက် တင်ပြပါမယ်။ သင့်အချိန်ကို သင်ဘယ်လို အကျိုးရှိရှိ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါမယ်။ ဒီမဟာဗျူဟာတွေရဲ့ ပထမအဆင့် ကတော့ သင့်တော်တဲ့ နေရာမှာ ငြင်းဆန် နိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်။ ဦးဆောင်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဟာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းကို သင်တတ်နိုင်သလောက် ပေးစွမ်းဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ဘဲ ဦးဆောင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့် တာဝန်များ ပိုမိုများပြားလာပြီး အရင်ထက် ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုတာ သင့်ကိုယ် သင်
Posted by ပုလဲသား at 12:04 AM0comments
Labels: လူမှုရေး ဆောင်းပါး, ဆောင်းပါး
မြန်မာဗျည်း (၃၃) လုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
အများသူတို.ကိုဗဟုသုတ ရစေချင်သောအလို.ငှာ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါသည်။
မြန်မာဗျည်း ၃၃-လုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်း ပြောရာမှာ ဗျည်းရော သရရော မြန်မာအက္ခရာ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာက စပြောဖို့လိုမှာပေါ့။ မြန်မာအက္ခရာဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘိစီ ၅၀၀-လောက်က ၇၀၀-ကျော်အထိ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ဗြာဟ္မီ (Brahmi) အက္ခရာက ဆင်းသက်လာကြောင်း ပညာရှင်တွေက မိန့်ဆိုကြတယ်။ခရစ်နှစ်ဦးပိုင်းလောက်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေ အရှေ့တောင်အာရှကို သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ ရွက်လွင့်လာ ရာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အက္ခရာ၊ နီတိကျမ်း၊ ဓမ္မသတ်ကျမ်း စတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေပါလာပြီး အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေမှာ ထွန်းကားတာပါ။ အဲဒီအက္ခရာဟာ မွန်လူမျိုးတွေဆီ အရင်ရောက်ပြီး အဲဒီကမှတဆင့် မြန်မာတွေဆီရောက်တယ်။ မြန်မာတွေက အဲဒီအက္ခရာတွေကို မြန်မာစကားသံတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် လိုအပ်သလို မွမ်းမံအသုံးပြုရာက မြန်မာအက္ခရာ ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
Posted by ပုလဲသား at 5:02 AM0comments
Labels: ပညာရေး ဆောင်းပါး, ဆောင်းပါး
Posted by ပုလဲသား at 4:52 AM0comments
Posted by ပုလဲသား at 2:56 AM0comments
Posted by ပုလဲသား at 2:40 AM0comments
Posted by ပုလဲသား at 2:36 AM0comments
ခွန်အား စိတ်ဓာတ် II
အသက်အရွယ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး... စိတ်ဓာတ်နုပျိုဖို့ပဲ အဓိကကျတယ်။
ခေတ်မီ မမီနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး... သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ဖို့ပဲ အဓိကကျတယ်။
အစားကောင်း အသောက်ကောင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး.... အာဟာရမျှတဖို့ပဲ အဓိကကျတယ်။
အကြီး အသေးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး.... သန့်ရှင်း ချမ်းမြေ့ဖို့ပဲ အဓိကကျတယ်။
နွေ မိုး ဆောင်းရာသီနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး.... အမြဲ ဇွဲရှိရှိလုပ်နိုင်ဖို့ပဲ အဓိကကျတယ်။
Posted by ပုလဲသား at 4:07 AM0comments
သူတစ်ပါးကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးချင်သူ (ဆရာဖေမြင့်)
တချို့လူက ပျင်းသည်။ တချို့လူက ဝီရိယကောင်းသည်။ ဝီရိယရှိ မရှိမှာ ပင်ကိုသဘော
ပါသလို မုဆိုးနားနီးမုဆိုး၊ တံငါနားနီး တံငါသဘောလည်း လွှမ်းမိုးသည်။ တချို့ဝန်းကျင်၌ ပေါ့ပေါ့
နေ ပေါ့ပေါ့စား သမားများသည်။ တချို့ဝန်းကျင်က ဝီရိယကောင်းသူတို့ စုဝေးရာ ဖြစ်သည်။ အ
လုပ်ကို တန်ဖိုးထားသော၊ အလုပ်လုပ်မှ အကျိုးခံစားရမည်ဟု ယုံကြည်သော၊ အလုပ်လုပ်ရခြင်း၌
မွေ့ေ လျာ်ပျော်ပိုက်သော သူတို့နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ပင်ကိုပျင်းရိသူတို့ပင် တဖြည်းဖြည်း လုံ့
လ ထုတ်သောအကျင့် ရလာတတ်သည်။ အလုပ်ကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးဟု သဘောထားသူ၊ ဘာမှ မ
လုပ်ဘဲ ရသည့်အရာမှ တကယ်`တန်’သည်ဟု မှတ်ယူသူတို့ ဝန်းကျင်၌ ထကြွလုံ့လသမားသည်
လှောင်ပြောင်ရယ်မောစရာ၊ လောဘကြီးသူဟူ၍ ပြစ်တင်ရှုတ်ချစရာ ဖြစ်နေတတ်သည်။ သည်
ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ အနေကြာသော် ပင်ကိုဝီရိယသမားသည် တစ်စတစ်စ လုံ့လလျော့သွား တတ်
Posted by ပုလဲသား at 3:56 AM0comments
Posted by ပုလဲသား at 9:04 AM0comments
Posted by ပုလဲသား at 8:03 AM3comments
Labels: နည်းပညာ, အင်တာနက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ, ဆောင်းပါး